Njengoba sekubonisiwe kakade, inomlando umndeni nomfutho wegazi ophezulu, ukuthi, uma abazali sifo esandile, it is hhayi ngaphandle ukuthi izingane zabo zizoba iwe ezonini ingozi. Ngezinye izikhathi nomfutho wegazi ophezulu Kumiswa ngesikhathi umzimba abasha, kodwa isikhathi eside akazange ukubona ngokwabo, futhi recurrences gqwa ukubizwa ngokuthi impendulo womuntu sezulu izinguquko, ngokwesibonelo.
Odokotela batusa zisuse izimpawu-high blood pressure, njengoba kusaqalwa yokugula kwakhe Kusengenzeka ukuyeka. Ngakho, ukuqina ehlelekile ne predominance zabantu abenza izinqubo, umsoco ofanele nokugwema usawoti kuzosiza kujwayeleke ingcindezi, "imfundamakhwela abanomfutho wegazi ophakeme."
Ngakho, zama ukuthola izimbangela nomfutho wegazi ophezulu, okuyizinto onhlobonhlobo. Isikhathi esining impela, ingcindezi igazi kwandisa ngokumelene okwenza izifo ekhona emzimbeni, isibonelo, iziyaluyalu isimiso sezinzwa, izinqubo umzimba noma ion exchange emisipheni.
Njengoba kufakazelwa umkhuba olunzulu yezokwelapha, kwabantu abakhuluphele ikakhulukazi othambekele lesi sifo. Ngaphezu kwalokho, kulesi sigaba iziguli ukungenwa isifo sokuqina kwemithambo yegazi, okuyilona elisebenzayo futhi umonakala wegazi.
Izimbangela nomfutho wegazi ophezulu zivame ezihlobene isimo isimiso sezinzwa, ngoba ukucindezeleka kwansuku zonke futhi unentshiseko ezinamandla ezingokomzwelo ukuthuthukisa ukusebenza kwe-adrenaline ku imisipha yenhliziyo. Inhliziyo, esikhundleni salokho, iqala ukunqabela ngokushesha futhi ke ihlaba umkhosi lemali ngaphezulu igazi, okuholela ingcindezi esikhula ngokushesha.
Ngaphezu kwalokho, izimbangela zezinkumbulo nomfutho wegazi ophezulu ngezinye izikhathi zimelelwa "okubi" umsoco nesineke, kanye nendlela yakhe emibi. Esimweni sokuqala sikhuluma ukusetshenziswa esiningi okunamafutha kanye nokudla okunosawoti, okuyinto unawo uketshezi emzimbeni futhi kwandisa ingozi exacerbation gipertezii. Futhi engozini babe bantfu labahlukumeta utshwala nogwayi imikhiqizo, kanye okuholela ukuphila umzimba futhi kwenza lutho.
Uma ukukhuluma okwengeziwe usawoti, kufanele waphawula ukuthi ukwanda anda sodium egazini lenza inhliziyo eyodwa ukusikwa ukuphonsa igazi ngaphezulu, ne-calcium ngokweqile kuholela zibe of imisipha abushelelezi nemisipha ukuthi ukusekela Imithambo yegazi, okuholela okhathazekile blood pressure isiqondiso.
Uma sikhuluma umzimba "ubudala", izimbangela zezinkumbulo nomfutho wegazi ophezulu kungenzeka kubangelwa nokudlanga lwemithambo sclerosis kanye kumiswa zingcwecwe phezu Imithambo yegazi. Uma ngaphezulu, engu-izitsha unciphise izimbobo kanye nokugcina evamile kwegazi, inhliziyo kufanele kube ngaphezulu Umbambe sisusa igazi ngokusebenzisa izitsha kubandakanya ukuthuthukiswa isici isifo.
Futhi, ningawenzi siqambe isifo sezinso, okungukuthi, ukuba khona emzimbeni ngenxa yezinso, okuyinto ingabagulisa engadingeki ingcindezi yeziqongo. Ngakho, ngenxa Ukuwohloka kwezinso liningi igazi zabelwe izinto asebenzayo avuse ushintsho olubonakalayo e ukulawulwa blood pressure, futhi kuzuba bakhe baye baba evelele.
Izimbangela nomfutho wegazi ophezulu zingase zihluke kakhulu, kodwa, njengoba wazi, nokuvimbela isifo kungcono kunokwelapha esikhathini esizayo kwanhlanga zimuka nomoya. Yingakho kunconywa ukuba unamathele yokuphila asebenzayo, thatha ukudla imikhiqizo ewusizo kuphela, futhi unomphela ukuqeda imikhuba emibi njengoba ukubhema nokuphuza. Izinyathelo ezinjalo zokuzivikela zidinga kuyokusiza ukuhlukana emzimbeni izimpawu zokuqala nomfutho wegazi ophezulu, kodwa futhi ukushaja ngayo vivacity usuku lonke.
Ubuchwepheshe odongeni Foam ukwahlukanisa kusuka ngaphandle. Ngaphandle odongeni ukwahlukanisa Foam: Izibuyekezo